तपाईं कसरी खुला क्षेत्रमा खीरे बढ्न थाहा छ?
खीरे - सबैभन्दा लोकप्रिय तरकारी बाली को एक। के तपाईं जान्दछन् कसरि खीरे बढ्न खुल्ला क्षेत्रमा? बीउ कसरी रोप्न कसरी बिरुवा लागि कसरी बगैंचामा आफ्नो मनपर्ने तरकारी बढ्न हेरचाह गर्न? का भर विस्तार बुझ्न गरौं।
लेट मे मा, यो जुन5सम्म जारी जो खीरे को बीउ, रोपेको लागि अनुकूल अवधि सुरु हुन्छ। 12 घण्टा (0.2 G - 1 लीटर, तीन superphosphate -5जी, पोटासियम नाइट्रेट - - 10 ग्राम मैंगनीज सल्फेट पानी) रोपेको बीउ 60 डिग्री को एक तापमान मा2घण्टा गरम अघि, त्यसपछि एक विशेष समाधान राख्नुभयो।
यो सुन्निएको बीउ यो एक उच्च उपज सुनिश्चित, शुष्क संग रोप्न सकिन्छ। बीउ आफूलाई पचास सेन्टिमिटर को एक दूरी मा recess बनाउने, तीन इन्च अलग furrows मा राखिनेछ।
धेरै धेरै मानिसहरू प्रश्न सोध्छन्: " कसरी, खुला जमीन मा खीरे बढ्न ? माटो सुक्खा छ भने" तपाईं छरिरहेका बीउ अघि जस्तै माटो मा grooves आवश्यक पानी हाले भनेर थाहा र पीट, छाडा माटो वा धरण र sawdust को एक मिश्रण संग छिडकना गर्न आवश्यक छ।
बीउ अब यो मार निगरानी गर्न आवश्यक छ, लगाए। तपाईं ridges मा चरा गुँड को साइट नजिकै छन् भने रचनाहरू फिलिम वा कागज rustling, को स्ट्रिप्स दाउरा बिसाउन, घुमाउँदा हावा rattles राख्नु, भरी।
निर्जीव - कसरी बोट लिम्प हुन्छ र पात भने, खुला जमीन मा खीरे बढ्न? प्रति मीटर वर्ग क्षेत्र2लिटर को दरमा न्यानो पानी (25 डिग्री) संग तरकारी संस्कृति फैल गर्न आवश्यक छ।
साथै, तपाईंले बिरुवाहरु बाहिर पातलो गर्न आवश्यक र weakest हटाउन। सामान्यतया, Thinning मौसमको लागि सिफारिस गरिएको छ loosening र weeding यसलाई संयोजन, 2-3 पटक खर्च। जब stems स्टप loosening, बढ्न। ककडी रोपेको एक महिना ब्लूम गर्न थाल्छ। पहिलो फल को उपस्थिति pollination सम्बन्धित छ: पहिलो फूल कहिलेकाहीं मौरीले निष्क्रियता कारण crumble।
कसरी खुला जमीन मा खीरे बढ्न को रहस्य
दक्षिण पक्षमा एक ओछ्यानमा बनाउन, यो बतास सुरक्षित हुनुपर्छ। दृश्य सूरजमुखी रोपण रूपमा, सिमी, आलु, मकै तिनीहरू चाँडै बढ्न र अनुकूल microclimate सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईं पनि माटो को looseness ध्यान गर्न आवश्यक छ।
बीउ माटो र सिधै ओछ्यानमा मा पछि रोपेको संग बर्तन मा रोप्न सकिन्छ। तर बस सिफारिस छैन बीउ रोप्न टीन गर्नुपर्छ: पानी हावा displaces, र यो अंकुरण ढिलाइ गर्न जान्छ।
हामी खुला जमीन मा खीरे बढ्न गर्दा, त्यसपछि, पाठ्यक्रम, हामी सकेसम्म धेरै फल प्राप्त गर्न चाहन्छु। घाँस कतरन, कटा पराल, मृत पात, sawdust र अन्य: तपाईँले विभिन्न मलबे को एक "न्यानो" seedbed बनाउन भने यो हासिल गर्न सकिन्छ। तातो पानी, राम, र त्यसपछि यसको SHED तातो पानी (10 लिटर) तामा सल्फेट संग (1 Tbsp। एल) संग disinfected। यसबाहेक, माटो को ओछ्यानमा, पीट, धरण मल, sawdust, टर्फ को एक मिश्रण भरिएको छ तामा सल्फेट फेरि बगाउन मल र पानी बनाउन। कि पछि, जमीन नयाँ फिलिम ढाकिएको छ।
त्यसैले, हामी कसरी जमीन मा खीरे बढ्न देख्यो। म पनि धेरै विविधता बीउ रोप्न भने, उपज उच्च हुनेछ भनेर याद गर्न चाहन्छु। फिड र पानी तरकारी बिहान लगभग 10 घण्टा हुनुपर्छ। ककडी मा सचेतक 1 मिटर सम्म गठन हुनुपर्छ, त्यसपछि टिप चिमोटे र पक्ष फिर्ता चिमोटे खैर 50 सेमी सम्म मार, सबै छ -। उच्च तपाईं बाली!
विदेशी ग्राहकहरु संग सहयोग - एक लाभदायक व्यवसाय
मोड टमाटर पात। के गर्ने?
मल "Baikal EM-1": आवेदन र समीक्षा
Nosema रोग उपचार र रोकथाम, लक्षण विवरण
दबाइ "Bystrumgel": analogues र अनुप्रयोग सुविधाहरू
केही उपयोगी व्यञ्जनहरु - को मशरूम कसरी तलना गर्न
एक नवजात लागि जाडो आवरण कसरी चयन गर्न
दशौं घरहरू ... एक सुन्दर पेंट हाउस। पेन्टहाउस डिजाइन
नक्साको लिजेन्ड के हो? पारंपरिक नक्शा प्रतीक को प्रकार
बन्दागोभी कस्तो गर्न सकिन्छ? फोटो संग सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु